Somalia Archives - Puntland Mirror Believable Media Website
April 7, 2021 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wadahadalada u dhaxeeya madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah ayaa dib uga bilaabmay Muqdisho maanta oo Arbaco ah kadib dhowr beri oo hakad ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo rasmi ah. […]
March 23, 2021 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Gaashaandhiga Talyaaniga Lorenzo Guerini ayaa maanta oo Talaado ah yimid magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Ujeedka safarka wasiirka ayaan weli la ogeyn, waxaase uu ku soo beegmay xilli Madaxweyne Farmaajo wakhtigiisii uu […]
Wasaaradda batroolka Soomaaliya oo sheegtay in ay soo bandhigi doonto macluumaadka shidaalka 15 xirmood oo badda ah
November 6, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaaradda batroolka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo bandhigi doonto macluumaadka shidaalka xirmooyin badda ah. Wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed oo maanta wareysi siiyay idaacada BBC qeybta Af-Soomaaliga ayaa sheegay in bisha December […]
September 30, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta oo Isniin ah weerar ku qaaday saldhiga Balidoogle oo kuyaala gobolka Shabeella Hoose, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan laamaha ammaanka. Gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa maleeshiyadu ay […]
July 24, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho galabta oo Arbaco ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka. Qaraxa ayaa dhaawac culus waxa uu ka soo gaaray duqa […]
May 3, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Jimce ah yimid magaalada Garoowe. Khayre ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Garoowe ku qaabilay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in […]